कता जादैछ समाज ? | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
कता जादैछ समाज ?
नेपाल नामको देश पुनर जागरणको युगमा प्रवेश गरे कै हो ? सामाजिक संरचना, धार्मिक सास्कृतिक, नैतिक मुल्यहरुमा अभुतपुर्व परिवर्तन किन कसरी आएको हो ? यसको समीक्षा अत्यन्त सामयिक र आवश्यक लागेको हुनाले कता जादैछ समाज ? यसका सकारात्मक नकरात्मक पक्षहरु के हुन सक्छन् ? अन्ततः समाज राष्ट्र कुन गन्तब्यमा पुग्न खाजी रहेछ ? यसको समुचित समीक्षा दक्ष समय भएन भने पाषाण युगमा प्रबेश हुने अंशका ब्याप्त भएको अनुभुति भईरहेको छ । समाज तिब्र गतिमा परिवर्तित हुदैछ ।
परम्पराहरुको तिरस्कार गर्ने मात्र होईन पुरातनबादीको पगरी लगाईने गरिन्छ । युवा पीढी दिशाहिन अराजक, उच्छींखल हुदै गएको र यसमा लागु औषध, इन्टरनेट फिल्म, कथित पाश्चात्य परिवेश कुनै न कुनै रुपमा जिम्मेदार छन् । ऐश्वर्य, दम्भ, पद शक्तिको दुरुपयोग प्रदर्शनबाट भ्रष्टाचारले आधारभूमि पाएको छ तलबको भरमा लगभग नगण्य मानिस रहेका होलान् दैनिक खर्च व्यहोर्ने समेत असम्भव रहेको स्थितीमा भष्टाचार शब्द जति अलोकप्रिय देखिए पनि त सजींवनीको काम गरी रहेको पाईन्छ । फेला नपर्दा सम्म यो अमृत तत्व भएर रहन्छ यो गर्न नसक्नेको त परिवारमा समेत तिरस्कार हुन्छ किनभने ऐश्वर्यको प्रतिस्पर्धामा पछी पर्न कर्मको चाहना होला हाम्रा कतिपय परम्परा, संस्कार, कथित धार्मिक क्रियाकलापहरुमा आडम्बर हुन सक्छ तर यो बिलकुलै समाप्त भएर कल्याण हुन्छ भन्ने होईन ।
पारिवारिक, सामाजिक आत्मीयता अपनत्व हराउदै गएको देखिन्छ यसलाई मलजल गर्ने काम दुषित राजनैतिले निकै बढी प्रोत्साहित गरेको छ । ऐन कानुन संबिधान कतिपय अबस्थामा शोभाका बस्तु बन्ने गरेका छन् राजनीति व्यवसायको रुपमा फले फुलेको छ । पद, शक्ति बाहुबल, समाजमा बलशाली भएको छ । पाश्चात्य दर्शन रिती परम्परा सबै खराब हुन भन्ने होईन तर स्थान समय विशेषणले निकै प्रभाव पार्दछ । दक्षिण भारत तर्फ कुनै ब्राहमण जातिले मांसहार गरेको पाईए बहिस्कृत हुन्छ । उत्तरी पहाडी भेगमा यसलाई अनुकरण गरिदैन त्यस्तै दक्षिणी भेग तर्फ मामाको छोरी विवाह गर्ने प्रचलन छ । हाम्रो समाज केही वर्गमा हाडनाता मान्दछ ।
पाश्चात्य शैलीमा अबिबाहित माता हुनु सामान्य छ त्यहा सम्बन्ध बिच्छेदन नियमित सामान्य जस्तै छ । विवाह नगरेर नै पुरुष महिला एकै साथ बस्नु पनि फैशन बनेको छ । नेपालको शहरी जनजीवनमा परिचित भन्दा पनि तिव्र गतिले यौनाचार बृहत भएर न्भत तयनभतजभच ष्खिष्लन एक साथ रहने गरी खुला यौन आमन्त्रित भए झै ऐन कानुन पनि विचित्रका बनेका छन् । आफ्नै विवाहित श्रीमतिलाई पनि अनुमति मागेर मात्र करणी गर्न पर्ने अन्यथा बलात्कार हुने त्यस्तै विवाहित महिलाले अर्को पुरुषसंग यौन सम्पर्क गरे मुद्धा नै नलाग्ने लोग्ने मानिसले अर्को स्वास्नी ल्याए बहुविबाह परिभाषित हुने जस्ता कतिपय विसंगति कानुनले समयानुकुल भनि व्यवस्था गर्दा अनैतिक अराजक र नैतिक मुल्य धराशायी पार्ने काम राज्यबाट नै भएको हुनाले समाज दिशाहीन मात्र होईन परम्परामा अन्तर द्वन्दलाई आमन्त्रण गरी सकेको छ र यसमा दुष्ट भावले समाजिक संरचना ध्वस्त हुदै गएको छ । हामीहरु बसाई सराईको व्यापक क्रममा निरन्तर छौ । पुस्तौ देखि रहे बसेका स्थानहरु प्रति कुनै लगाब देखिदैन । परिवर्तनको चाहना यसको मुल हुनु पर्दछ । यहाँको मिश्रित समाज कोही कसैप्रति सरोकार नगर्दा पनि फरक नपर्ने एकाअर्का प्रतिको सद्भाव खाशै प्रभावकारी नहुने संस्कृति परम्पराहरु कतिपय अवस्थामा बोध जस्तै अर्थहिन बन्ने गरेका छन् । छाडा स्वच्छन्द प्रवृत्तिको जताततै बोलवाला छ । वारिस कतै देखिदैन बाहुवलीहरुको वर्चश्वले आम सर्वसाधारणका लागि बाच्न मुश्किल पारी रहेको निरन्तरताले समाज विकृत दुषित बनेको अनुभूति भई रहन्छ ।
आउदा दिनहरुमा समाजका यस्ता विकृतिहरु जताततै अराजकता भ्रष्टाचार यौनाचार व्यभिचारबाट सामाजिक दुर्गन्ध बढ्दै गएको र निकट भविष्यमा यो भार थामी नसक्नु भएपछि तानाशाहीको उदय निश्चित छ । एकिकृत नेपाल र हाम्रो सामाजिक संरचना ध्वस्त हुने स्थितिका लागि जिम्मेवार को हो त्यो भनि लेखी रहनु आवश्यक नै छैन । घाम जत्तिकै छर्लगं छ । इतिहासलले स्वयं मुल्यांकन गर्ने छ तर यथास्थितिमा रही रहन असंभव हुनेछ । समयमा सोचौं भन्नुको अर्थ पनि छैन किनभने विनाशका बखत त्यति सोच्ने फुर्सद कसलाई होला ?
खेतवारी बाझो राखी विदेशबाट आयात →